Xiaomi ၏နောက်ထပ် Black Shark ကို ၂၇-watt မြန်သောအားသွင်းခြင်းဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသည် Androidsis
Xiaomi ၏လာမည့် Black Shark သည် ၂၇-watt မြန်သောအားသွင်းစနစ်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
Xiaomi ကယင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် စမတ်ဖုန်းတံဆိပ် Black ကငါးမန်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Qualcomm's Snapdragon 845 ကိုအသုံးပြုပြီးအရည်အသွေးတွေရှိသည့်ဒီမော်ဒယ်၏ပထမဆုံးမော်ဒယ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် ဂိမ်းကစားခြင်း။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဂိမ်းများအတွက်ဆက်ခံမည့်မော်ဒယ်လ် ၂ ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်သည် Black ကငါးမန်း Helo y Black ကငါးမန်း 2။ အခုနောက်ထပ်ပုံ, လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ၏အချက်အလက်များအရသိရသည် နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၂၇ ဝပ်ဝပ်မြန်သောအားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြင်ဆင်ပေးသည်။
Terminal သည်မှတ်ပုံတင်တွင်“ DLT-A0” နံပါတ်နံပါတ်ပေါ်လာပြီးအတည်ပြုသည့်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သူ၏လက်မှတ်သည်များစွာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုပြသခဲ့သည် 27W အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းသည် (9V 3A, 12V 2.25A, 20V 1.35A)။ သတိရရမည့်အချက်တစ်ခုအနေနှင့် Black Shark2သည် ၂၇ watts အမြန်အားသွင်းခြင်းကိုထောက်ခံသည် Xiaomi က Mi 9.
၂၇-ဝပ်ဝပ်မြန် Charge ဖြင့်ဖုန်းလာမည်
မည်သည့်ပုံစံသည်လာမည့်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါအကယ်၍ ၎င်းသည် Black Shark3သို့မဟုတ် Black Shark2ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်လျှင်မူရင်း Black Shark အတွက် Black Shark Helo ကဲ့သို့ပင်။ ဤဖုန်းအသစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာများစွာရှိနေသေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Black Shark2အတွက်အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
Black Shark 2၊ ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်၏ထူးခြားချက်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
သတိရပါ: Black Shark2သည် ၆.၃၉ လက်မအရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်ကို FullHD + resolution ဖြင့် ၂,၃၄၀ x ၁၀၈ ပစ်ဇယ်များဖြစ်သော SoC ကိုအသုံးပြုသည်။ Snapdragon 855 Qualcomm, Adreno 640 GPU၊ ၆/၈/၁၂ GB RAM၊ ၁၂၈/၂၅၆ GB သိုလှောင်မှုနေရာ၊ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ၊ ၁၂ MP MP အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုနှင့်ရှေ့ကင်မရာသည် selfie အတွက်6megapixels ပါဝင်သည်။ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ထို့ထက်ပိုသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များမှ ကျနော်တို့ကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့နောက်စမတ်ဖုန်းမှာပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi ၏လာမည့် Black Shark သည် ၂၇-watt မြန်သောအားသွင်းစနစ်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
အဆိုပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုလျှောက်လွှာ Snapchat ကဲ့သို့သော filter များရှိသည်လိမ့်မယ်